​सङ्कटमा निजी क्षेत्रले नसघाएको परराष्ट्रमन्त्री थापाको गुनासो
काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले देशलाई सङ्कट परेका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध..
​व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई विधेयक पारित गर्यो
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१’ पारित गरेको छ । उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद..
भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क पुनः सङ्कलन गरिने
नुवाकोट । नक्कली भूकम्पपीडितको सङ्ख्या बढेको भन्दै भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क पुनः सङ्कलन गरिने भएको छ । सरकारले घर निर्माणका लागि रु दुई लाख अनुदान वितरण गर्नुभन्दा पहिले नै भूकम्पपीडितको नयाँ तथ्याङ्क सङ्कलन..
​करुणा फाउन्डेसनद्वारा रु ४० लाख अनुदान
इलाम, । अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रममार्फत करुणा फाउन्डेसनले अपाङ्गता बालबालिका अध्ययन गर्ने स्रोतकक्षा, भूकम्प प्रभावित स्वास्थ्य चौकी, अपाङ्ग बालबालिकाको वृत्ति विकासका लागि रु ४० लाख अनुदान दिएको..
​एक वर्षमा अपराधमा संलग्न ३२६ विदेशी निष्कासित, एनआरएन पनि निष्कासनमा
काठमाडौं, । सन् २०१५ मा पर्यटकका रूपमा नेपाल आएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न ५१ देशका ३२६ विदेशी नागरिकलाई नेपाल आउन नपाउने गरी सरकारले निष्कासन गरेको छ । तीमध्ये धेरैजसो अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा..
​नक्कली चिकित्सक र डिआइजीको छोरी भन्दै ठगी गर्ने युवती पक्राउ
काठमाडौ । काठमाडौँ, पोखरालगायतका विभिन्न स्थानमा चिकित्सक तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को छोरी हुँ भन्दै ठगी गर्दै हिँडेकी भगवती केसीलाई महानगरीय प्रहरी परिसरले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको छ । गुल्मी, हस्तिचौर–९..
​पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत २०१५ को विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत ‘विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ चुनिएका छन् । बेलायतको प्रख्यात म्यागेजिन ‘दी ब्यांकर म्यागेजिन’ले आफ्नो सन् २०१६ को अंकमा अर्थमन्त्री महतलाई सन् २०१५ को विश्वकै उत्कृष्ट..
​ठेक्का प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लेखा समितिको चासो
रमेश लम्साल काठमाडौँ । सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भए पनि त्यसमा चलेखल भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिको आजको बैठकले सो..
​बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सबैको उत्तिकै भूमिकाको आवश्यकता
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सिपी मैनालीले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज..
​नक्कली मदिरा बनाउने तीनजना पक्राउ
लहान । नक्कली मदिरा बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सिरहा प्रहरीद्वारा लहानबाट पक्राउ गरिएका तीन जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व विभागमा पठाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको टोलीले नक्कली मदिरा..
​स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तीनजनामाथि राज्यविरुद्ध अपराध मुद्दा
लहान । डा सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनमा आबद्ध तीनजना नेता कार्यकर्तामाथि सिरहा प्रहरीले राज्यविरुद्ध अपराध तथा कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । सिरहाको लहान नगरपालिकाबाट शनिबार पक्राउ परेका..
​‘संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण अभियान’
पाल्पा । नेकपा (एमाले) पाल्पाले ‘संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण अभियान, २०७२’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा पाल्पा जिल्लाभित्रका सबै गाउँ कमिटी र नगर कमिटीको बैठक सम्पन्न..
​पूर्वी नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस
काठमाडौ । पूर्वी नेपालमा आज बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । नेपाल र भारतको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । बिहान ४ बजेर ५३ मिनेटमा भारतको मनिपुरको..
​छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन
तुलसीपुर । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आज दाङको घोराहीमा आयोजना गरिएको दाङ जिल्लाको वर्तमान अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र..
​हालसम्म नेपालमा एक हजार १६९ हुलाक टिकट प्रकाशन
काठमाडौं । हुलाक सेवा विभागले हालसम्म एक हजार १६९ हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याएको छ । विभागले नेपाल फिलाटेलिक ब्युरोको सहयोगमा सन् १८८१ देखि हुलाक टिकट प्रकाशनमा ल्याउन सुरु गरेको थियो ।..
​समान हैसियत भएलाई किन बढी सुविधा ? को–कसलाई सुविधा ? कानुन छैन
काठमाडौँ । समान हैसियत भएका एक सांसदले राज्यबाट सवारी तथा सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने र अन्य सांसदहरुले भने कुनै सुविधा नपाएको भन्दै केही सांसदको आपत्ति रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार..
​‘सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा सुन तस्करीमा सङ्लग्नले उन्मुक्ति पाए’
रमेश लम्साल काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच फरक–फरक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दा सुन तस्करीमा सङ्लग्नहरु कारबाहीमा पर्न नसकेको तथ्य फेला परेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले व्यवस्थापिका–संसद्..
​लेखापरीक्षण तथा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी प्रशिक्षण
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आफ्नासमक्ष दर्ता भएका राजनीतिक दलको आयव्यय विवरणको लेखापरीक्षण तथा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी प्रशिक्षण यहाँ सुरु गरेको छ । छ दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा आयोगमा दर्ता रहेका १७९..
​उपेन्द्रले भने: ‘राजेन्द्र महतोले राम्रो गरेनन’ पृथ्वी नारायण शाह नेपाल एकीकरणका नायक हुन
काठमाडौ । लामो समयदेखि मधेसी मोर्चा भित्र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग मतभेद रहँदै आएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सद्भावनाको अलग्गै आन्दोलनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनीहरुले ठिक नगरेको..
​नाकाबन्दी नहटेसम्म प्रधानमन्त्री भारत टेक्दैनन्
गाईघाट । सहरी विकास राज्यमन्त्री मञ्जुकुमारी चौधरीले भारतले अहिले नेपालविरुद्ध अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दी नहटाएसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारत नटेक्ने बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल उदयपुरद्वारा आज सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजित पत्रकार..
सिमानाकाबाट बेचबिखनमा परेका ३० महिलाको उद्धार
काँकडभिट्टा । माइती नेपाल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय काँकडभिट्टाले सन् २०१५ मा बेचबिखनमा परेका ३० महिलाको उद्धार गरेको छ । माइती नेपालका पूर्वाञ्चल संयोजक गोविन्द घिमिरेका अनुसार एक वर्षका अवधिमा भारतको कोलकाता,..
​चिसो बढेपछि भूकम्पपीडितले ऋण खोजेर घर बनाए
प्रशन्न पोखरेल गोरखा । बढ्दो चिसोमा टहरामा दिनरात कटाउन मुस्किल भएपछि गोरखा बारपाकका भूकम्पपीडितले धमाधम घर बनाएका छन् । अर्मोपर्मो र केहीले कामदार लगाएरै घर निर्माण गरेका हुन् । कामदारलाई दिने..
प्रचण्डको विरोध गर्दा हितराज पेरिसडाँडाबाट गलहत्याइए
काठमाडौं । निकै ठूलो सकसका साथ केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नै विश्वासपात्रले गिज्याए । हुन पनि बैठकको अन्तिम दिन, सबैले बोलेपछिका अन्तिम वक्ता प्रचण्ड निकै..
​पत्रकारका लागि सन् २०१५ मा यस्तो रह्यो
काठमाडौँ । सन् २०१५ अप्रिल २५ मा गएका भूकम्प र परकम्पका कारण एक हजार ८१३ पत्रकार र २६६ सञ्चारगृह प्रभावित भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ । ‘गोरखापत्र’मा आबद्ध पत्रकार सुमन..
भूकम्पपीडितको व्यथा: उद्धारमा खटिएको अमेरिकी हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको पीडित परिवारले बिमा रकम पाएनन्
दोलखा । भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरुको उद्धारका लागि खटिएको अमेरिकी मरिन हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरुका पीडित दोलखाली परिवारका आफन्तले आठ महिना पुगिसक्दा पनि बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । घाइते लिएर..
​यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्राविधिक निर्देशक उपसचिव नविनकुमार पोखरेललाई घुस लिँदालिदै पक्राउ गरेको छ। विद्युतीय सवारीको नविकरण शुल्कमा घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले पोखरेललाई पक्राउ..
​भूकम्पपीडितको गुनासो : न त रु १५ हजार पाइयो, न रु १० हजार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खासगरी हिमाली क्षेत्रमा हवाई मार्गबाट न्यानो ओढ्ने ओछ्याउने लत्ताकपडा समेतका सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जाडोबाट..
​बिहेको कुरा नमिलेपछि कृष्ण कुमारीको हत्या
गाईघाट । चार दिन अघि उदयपुर जिल्लाको रामपुर ठोक्सिला गाविस ८ बस्ने बर्ष ३८ की कृष्ण कुमारी कटुवालको हत्या स्थानीय मजदुर सरोज मगरले गरेको खुलेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर..
मौसमी चक्रका कारण आगामी २०१६ साल १७ वर्षयताकै भयावह हुने
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले एल निनो मौसमी चक्रका कारण आगामी वर्षको मौसमी अवस्था १७ वर्षयताकै भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसका कारण विश्वभर भोकमरी, खडेरी, बाढी..
एसएसबीद्वारा ग्यास नियन्त्रणमा
गौशाला । महोत्तरीको पूर्वी सीमा नाका मटिहानीमा सीमापारिबाट ल्याइँदै गरेका आधा दर्जन ग्यास भरिएका सिलिन्डर आज भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्लाको दोस्रो मुख्य भन्सार नाका मटिहानी..
Results 1994: You are at page 62 of 67